Hiran State - News: Qeybtii labaad magaalada Bulo Burde sawiradani waa Old Buulaay oo iyadane siweyn loo dhisay walow meelaha la dhisay ay yahiin meelahii sida gaarka ah loo lahaa.
Qeybtii labaad magaalada Bulo Burde sawiradani waa Old Buulaay oo iyadane siweyn loo dhisay walow meelaha la dhisay ay yahiin meelahii sida gaarka ah loo lahaa.
Hiiraan:-Qeybtii labaad magaalada Bulo Burde sawiradani waa Old Buulaay oo iyadane siweyn loo dhisay walow meelaha la dhisay ay yahiin meelahii sida gaarka ah loo lahaa.
Magaalada Bulo Burde waxey ka mid tahay magaalooyinka waaweyn ee ku yaala dalka Somaliya ee nasiibka u yeeshay in fanaaniinta Somaliyeed u qaadaan heeso lagu amaanayo magaalada iyadoo fanaanka caanka ah Baastow horey ugu qaaday heestii aad u soo jiidatay indhaha bulshadii Somaliyeed ee xiligaasi jirtay.
Inkasta oo aanu miraha heesta halkan ku soo koobi karin waxaanu ka xasuusanaa qeyb heesta ka mid ah oo aad loogu amaanayo dumarka magaalada Bulo Burde.
Waxuuna fananku yiri "waa midaan u bogayoo Bulo Burde joogtee baarweynta geeliyo laga dhiibay boqolaal.Beled aan la yaabo caanahaa sidii biyahii Haamuhu ay ka buuxaan. sidoo kale waxaa miraha heesta ka mid ahaa dhinackasta oo uu fanaanku u jeesto waxey inahiisu qabanayeen geber wada birqeysa amaba sida uu tilmaamay aad u qurux badan.
Marka laga soo tago dhinaca wanaagsan ee shacabka Bulo Burde hadane hadaan dib u jaleecno waayadii hore waxey ahaayeen dad dhib badan siiba marka magaalada la keeno ruwaayad ninkasta oo markaasi qaan gaar ah waxuu toos u aadayaa Hotelka ay fanaaniinta magaalada ka degan yahiin oo inta badan ahaa Hotel Amalow.
Fanaaniinta ayaa la handadayaa ilaa ay ka dhahaan war yaa magaaldan xakuma maadama midka ugu horeeya ee ay gudaha Hotelka ay ku weydiiyaan ayaa leh aniga
Fanaaniinta qaarkood waligood Mogdisho ma soo dhaafin qaarbaa dib Mogdisho ugu laabanaya qaarne waxey codsanayaan ciidamo Police ah oo habeenkaas ruwaayada ka ilaaliya fowdada. qaar ruwaayada shuut ayey ku galayaan hadii xaalku xumaadona nalalka iftiimayo oo dhan ayey jabinayaan calashaa dhawr saac ayaa reer Mudug oo kale loo dhaqmayaa inkasta oo aan Mudug leyskuba dayeyen inba ruwaayad lacag lagu galo sida nagu maqaalaa ,hadane reer Bulo Burde xitaa hadey heystaan waxey u dhaqmayaan in iyaga magaalada loogu yimid kedibna maadama ay magaalada ka yimaadeen fanaaniin badan iyagaaba kuwa ruwaayada keenay ka qosol badan.
Midbaa waxuu iska leeyahay Salaax Qasin Naaji iku salaan u sheeg walaalkiis waa jiran yahay.midbaa leh aniga Qadiijo Hiiraan ayaan walaalo nahay. qaar baa ku leh Ahmed Nuur Jaankow ayaan doonayaa inaan arko xitaa isagoo og in uusan kooxda ruwaayada dhigeysa la socon.qaar waxey leeyahiin Cali Cabduule Guure nagu salaan.Fanaaniintii ruwaayada keentay ayey magaalada u tusinayaan iney magaaladu tahay magaalo fanaaniin caan ah ka yimaadeen.
Reer Bulo Burde marka laga sheegeynayo waxaa ugu rooneyd mar ay hal mar soo wada baxeen oo ay Mogdisho u aadeen jaamacad iyo iney ka dhoofaan iyagoo marka ay Mogdisho tagaan kuwooda doonaya iney ka dhoofan ka howl bilaaba Cabdalla shideeye iyagoo marka hore iska dhiga muqalas sidey kuu leeyahiin Romaniya madooneysaa Vissa I-20 ayaa ii xareysan Mareykanka ayan u socdaa iyo wax la mid ah ayaad waxaad maqleysaa hebel Sacudiga laga soo tarxiilay.
Hadaba maanta intaan ha inoo joogto
· admin on September 16 2011 23:20:14 · 0 Comments · 5511 Reads ·
14,638,473 unique visits